Sunday September 27, 2020 - 12:54:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa dilaaga ah ee Carona Virus ayaa wali sii wada gummaadka uu ka geysanayo daafaha caalamka inta lagu gudajiro mowjad labaad oo wadamo badan oo aduunka ah ka dhacdey, mudadaas oo tirada infekshannada ay kor u dhaaftay in ka badan 33 milyan, halk
Caabuqa dilaaga ah ee Carona Virus ayaa wali sii wada gummaadka uu ka geysanayo daafaha caalamka inta lagu gudajiro mowjad labaad oo wadamo badan oo aduunka ah ka dhacdey, mudadaas oo tirada infekshannada ay kor u dhaaftay in ka badan 33 milyan, halka tirada dhimashada ilaa waaberigii hore ee Axadda ay gaartay in ka badan 997 kun, sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee lagu daabacay bogga "World Meter".
Covid19 wuxuu dhibaatada ugu daran ka geysanayaan qaaradaha America,Yurub iyo Aasiya oo la moodo in laba kaclaynta cudurka ay uga darantahay markii uu bilaabanayay.
Wadanka Mareykanka oo wali kaalinta koowaad uga jira dalalka ladhiban Carona Virus ayaa shalay markale lagasoo calaamadeeyay kumanaan bukaan iyo boqolaal dhimasho ah.
Gobolka New York oo xudun u ahaa fiditaanka FayruskaCorona ee dalka Maraykanka ayaa shalay martigeliyay tirada bukaanno cusub oo kor u dhaafaya 1000 ruux maalin qura waana markii ugu horreysay tan iyo 5-tii Juun oo wax sidaan lamid ah ay gobolka ka dhacaan sida lagu sheegay tirakoob uu daabacay xafiiska Guddoomiyaha Gobolka ninka lagu magacaabo Andrew Como.
Guud ahaan, xaaladda caafimaad ee Gobolka New York way soo hagaagtay tan iyo markii dhibaatada virusku gaafrtay meeshii ugu sarraysay gugii la soo dhaafay.
Tirada dadka uu soo riray Coronavirus-ka ee Mareykanka ayaa gaartay 7 milyan 282 kun iyo 774, sida lagu sheegay tirakoobyadii ugu dambeeyay, wadankuna wuxuu diiwaan geliyay 209 kun iyo 110 dhimasho ah taas oo ah tirada ugu badan ee adduunka.
Carona ayaa tafaha qabtay horukaca dhaqaalaha dowladda Mareykanka isagoo shaqa la'aan dhigay inkabadan 25 malyuun ruux american ah taas oo ka dhigan musiibadii ugu weyneed ee 50 sano ku habsata Mareykanka.
Tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale muujisay in 4 gobol oo ka tirsan Mareykanka ee loo yaqaan 'Midwest American' ay diiwaangeliyeen kororka Virus-ka Corona sabtidii, marka loo eego kororka tirada bukaannada ee waddanka oo dhan usbuucii labaad oo xiriir ah, kuwaas oo kala ah Minnesota, Montana, South Dakota iyo Wisconsin.
Dalalka Baraaziil iyo meksiko ayaa iyana wali ladaalaa dhacaya halista uu geysanayo caabuqa Covid19 mana jirto wax soo hagaagsanaan ah oo lataaban karo sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee soo baxay.
Wasaaradda Caafimaadka ee Brazil ayaa sheegtay in ay diiwaangelisay 28,378 kiis oo cusub oo ah coronavirus-ka soo baxaya 24-kii saac ee la soo dhaafay, marka lagu daro 869 qof oo cudurka u dhintay.
Xogta wasaaradda ayaa muujisay in Brazil ay diiwaan gelisay in ka badan 4.7 milyan oo kiis oo cudurka Karoona ah tan iyo bilowgii markii uu cudurku dillaacay halka tirada rasmiga ah ee dhimashada ay gaartay 141,406 oo ruux.
Ugu dambayntiina dalka arjantiin ayaa soo tiigsaday kaalinta shanaad ee dalalka caalami ahaan ladhibaataysan Carona Virus, wasaaradda caafimaadka Arjantiin ayaa sheegtay in todobo maalmood oo xiriir ah ay diiwaan geliyeen 11 kun oo bukaanno ah iyo dhimashada boqolaal qof.